Catagories: Ukukhutshwa kwesityalo
Inkangeleko: Powder emdaka
Umsebenzi ophambili weRosmarinic acid kwizithambiso kunye neemveliso zokhathalelo lolusu zinjengee-anti-inflammatory agents kunye ne-antioxidants, ipharamitha yomngcipheko yi-1, ekhuselekileyo kwaye inokuqiniseka ukuba iyasetyenziswa.
I-Rosmarinic acid yinto ebalulekileyo yokukhupha i-rosemary. Inempawu ezinamandla zokulwa ne-antioxidant, eyomeleleyo kune-vitamin E, i-caffeic acid, i-chlorogenic acid, i-folic acid njalo njalo. Iyakwazi ukucacisa ngokufanelekileyo i-oksijini esebenzayo ekungcolisweni kwendalo, inqabile ukuyilwa kwe-melanin, kwaye ineempembelelo ezimhlophe kunye nokuthambisa.
I-Rosmarinic acid ikwanazo neempawu ezichaseneyo nokudumba, ezinokukhusela ulusu, zomeleze ulusu, zikhuthaze ukujikeleza kwegazi kunye nokusebenza kolusu. Ikwaxhasa ukugcina kude nosulelo oluyingozi nolunganyangekiyo, ukumelana nokukhanya kwe-UV kunye nokwenza kungasebenzi ukuthotywa kwe-elastin, konke oku kwenza ukuba ibe sisongezo sendalo esihle kwiimveliso zokhathalelo lolusu. Okwangoku, i-rosmarinic acid ibonakalisile ukubaluleka kwayo kwesicelo kwicandelo leemveliso zolusu.
Ukuthintela ungcoliseko, iimveliso zolusu ziqulathe izinto ezikhuselayo ngesiqhelo ezizinto ezingakhuselekanga ezinokubangela ukudumba njengokucaphuka kolusu. Ukusetyenziswa kwe-rosemary extract kwiimveliso zokunakekelwa kwesikhumba kusombulula nje ingxaki. Isicatshulwa seNdalo seAntioxidant Rosemary sineenzuzo zokwandisa ubomi beenkonzo zeemveliso zokhathalelo lolusu, sithathe indawo ye-antioxidants ezingezizo kunye nokunciphisa umxholo wokulondolozwa kwifomula.